घरकै खान्कीले घटाउँछ रक्तअल्पता- विचार - कान्तिपुर समाचार
घरकै खान्कीले घटाउँछ रक्तअल्पता
जेष्ठ ३०, २०७६ अरुणा उप्रेती
करिब ३२ वर्षअघि एक रात म प्रसूति गृहमा इमर्जेन्सीमा थिएँ । भोलिपल्ट बिहान छ बजेतिर वीरगन्जकी एक महिला आइपुगिन् । उनको सुत्केरी व्यथा थियो, पहेँली देखिन्थिन् । उनको रगतको कमी कति रहेछ भनी जाँचियो । लगत्तै उनलाई बेसरी पेट दुख्यो र इमर्जेन्सी कक्षामै बच्चा जन्माइन् । बच्चा सानो भए पनि ठूलो स्वरले रोयो ।
तर, आमाको रक्तअल्पताको परिणाम थाहा पाएपछि हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी अचम्मित भयौं । विज्ञानको नियम अनुसार त उनको मृत्यु भइसक्नुपर्ने थियो । स्वस्थ व्यक्तिको हेमोग्लोबिनको स्तर १२–१५ हुनुपर्नेमा उनको २ मात्र थियो ! उनी आफू मात्रै बाँचिरहेकी थिइनन्, भर्खर सानो भए पनि स्वस्थ बच्चा जन्माएकी थिइन् ।
कसरी यस्तो हुन सक्छ भनेर मैले सिनियर स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. हीरा डंगोललाई सोधें । उहाँले भन्नुभयो, ‘उनको शरीरमा रगतको काम बिस्तारै हुँदै गयो, शरीरले आफै सन्तुलन मिलायो । सुत्केरी हुँदा धेरै रगत बगेको भए उनलाई बचाउन गाह्रो पर्थ्यो । प्रकृतिमा कहिलेकाहीं अचम्म पनि हुन्छ । हाम्रो ज्ञानले सायद बुझ्दैन ।’ अस्पतालमै राखेर छ दिन रगत चढाएपछि ती महिलाको हेमोग्लोबिन ८ पुग्यो अनि उनलाई घर पठाइयो । परिवारले उचित खानपिनको व्यवस्था गरिदिएको भए उनी यस्तो कमजोर हुने थिइनन् । उनले छोरो पाउँदाचाहिँ सबै हर्षित थिए । उनले छोरी पाएकी भए गर्भावस्थामा झैं घरका मान्छेले सायद वास्तै गर्दैनथे ।
कतिपय ग्रामीण समुदायमा घरपरिवारले गर्भवतीको स्वास्थ्यको उति वास्ता गर्दैनन् । ‘वंशको रक्षा गर्ने गरी छोरा जन्माइन्’ भने मात्रै उनको हेरविचार हुन्छ । यस्तै कारणले गर्दा धेरै महिला रक्तअल्पताको सिकार हुन्छन् । तर, जुनसुकै महिला रक्तअल्पताको सिकार हुनुको अर्थ हो— शरीरमा लौहतत्त्वको मात्र होइन, प्रोटिनको पनि कमी हुनु । त्यस्ता गर्भवतीलाई भिटामिन, क्याल्सियम र अन्य पोषक तत्त्वको पनि कमी हुन्छ, किनभने उनले घरमा भएका स्वस्थकर खानेकुरा पनि पेटभरि खान पाएकी हुन्नन् । उनको चिन्ता र वेदनाले गर्दा खाएको कुरा पनि राम्रोसँग आन्द्रामा सोसिन पाउँदैन । पोषण भनेको भोजन मात्र होइन ।
शिशुहरूलाई आमाको दूधबाटै लौहतत्त्व प्राप्त हुन्छ । तर आमाले पनि प्रोटिनयुक्त र लौहतत्त्व पर्याप्त खाएको हुनुपर्‍यो । शिशुले खाने लिटो फलामको भाँडामा पकाउँदा पनि शरीरले लौहतत्त्व प्राप्त गर्न सक्छ । दूध उत्तम भोजन हो, तर यसमा लौहतत्त्व हुँदैन । त्यसैले गाई, भैंसी वा डेरीको दूध बच्चालाई फलामको भाँडामा तताएर दिनाले केही लौहतत्त्व प्राप्त हुन्छ ।
बच्चाहरूलाई लौहतत्त्व र अन्य पौष्टिक तत्त्व राम्रोसँग मिलोस् भन्न विभिन्न फलफूल, जुन सस्तो हुनुका साथै सहजै पाइन्छन्, खानु उचित हुन्छ । आफ्नै करेसाबारीमा पाइने आरु, आरुबखडा, अम्बा, अमला, नासपातीबाटै उपयुक्त पौष्टिक तत्त्व पाइने भएकाले महँंगा स्याउमा पैसा खर्च गर्नुपर्दैन, बट्टाका महँगा खाना नै दिनुपर्छ ।
खाद्यपदार्थका कतिपय विज्ञापनमा ‘घरमा भएका खानेकुराले बच्चालाई र गर्भवतीलाई पोषण पुग्दैन, त्यसैले बाहिरको पोषण किनेर क्याल्सियम र आइरन तत्त्व तिनको पोषण पुर्‍याउनुपर्छ’ भनिएको हुन्छ । यस्ता गलत विज्ञापनले मानिसहरूमा भ्रम छरिरहेका छन्, किनभने यिनलाई स्वास्थ्यकर्मीले पनि गलत भन्ने गरेका हुन्नन् । प्याकेटका खानेकुरा किन्दा पैसाको दुरुपयोग मात्रै हुन्छ ।
बकुला, सिमी, बोडी जस्ता तरकारीमा पर्याप्त प्रोटिन त पाइन्छ नै, क्याल्सियम र लौहतत्त्व पनि धेरै हुन्छ । तिनको मूल्य बजारिया वा विदेशी संस्थाहरूले दिने खानेकुराभन्दा निकै कम हुन्छ, पोषण चाहिँ बढी हुन्छ ।
एक–दुई वर्षको शिशुलाई परिवारका अन्य सदस्य नै खाने साग, गेडागुडी नै खुवाउन सकिन्छ । खानेकुरामा रहेको लौहतत्त्वलाई शरीरमा सोसाउन सजिलो उपाय छ । दाल भात तरकारी कागतीको रस वा गोलभेंडाको अचारसँग खाइयो भने यसमा रहेको भिटामिन सीले लौहतत्त्व सोसिन निकै मद्दत गर्छ । लट्टेको सागमा भिटामिन ए र लौहतत्त्व दुइटै प्रशस्त पाइन्छ । भटमासमा फोलिक एसिड, आइरन र प्रोटिन पर्याप्त हुन्छ ।
गेडागुडीलाई उमारेर पकाउनाले यसमा पौष्टिक तत्त्वको मात्रा बढ्छ । पाकिसकेपछि अलिकता कागतीको अमिलो वा गोलभेंडा हालिदिनाले भिटामिन सीले यिनमा रहेको लौहतत्त्व राम्ररी सोसिन पाउँछ । त्यसैले होला, पहिले–पहिले दालभात, साग, अमिलो मोही खाने चलन थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ गर्भवतीलाई आइरन चक्की दिएर नै रक्तअल्पता कम हुन्छ भनी जताततै आइरन चक्की बाँड्छ । कति महिलालाई त्यसले वाकवाकी लाग्छ, अनि खान छोड्छन् । अहिले त कतिपय प्रदेशमा किशोरीलाई समेत आइरन चाहियो भन्दै फोलिक एसिड बाँड्ने कार्यक्रम चलाउने रे ! मानव पोषणलाई टुक्रा–टुक्रामा विचार गरेर, टुक्रे–टुक्रे कार्यक्रम गरेर महिला र किशोरीको स्वास्थ्य राम्रो हुने वा रक्तअल्पता कम हुने हुँदैन ।
हाम्रो ‘स्वास्थ्य’ कि ‘रोग’ मन्त्रालयले धेरै पैसाले आइरन चक्की र फोलिक एसिड किन्छ, तर त्यसले महिलाको रक्तअल्पता घटाउन सकेको छैन । सन् २००६ मा ३६ प्रतिशत गर्भवती महिलामा रक्तअल्पता थियो भने २०१६ को सरकारी तथ्यांक अनुसार यो ४१ प्रतिशत पुगेको थियो । यति धेरै फोलिक एसिड, आइरन चक्की बोक्दा पनि रक्तअल्पता कम भएन । रक्तअल्पता सामाजिक समस्या हो र आइरन चक्की बाँडेर समाधान हुँदैन भनी यो मन्त्रालयले कहिले बुझ्ने होला ?
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:४१
भेनेजुएला भर्सेज सुन्दरी प्रतियोगिता
सौन्दर्य प्रशाधन कम्पनीहरूले मानवीय मूल्य, मानवीय सौन्दर्य चेतना आदि सबै महिलाको आँखा, नाक, दाँत, वक्ष र कम्मरमा हुन्छ भन्ने भावना जागृत गराइदिन्छन् ।
मंसिर २२, २०७५ अरुणा उप्रेती
काठमाडौँ — मिस भेनेजुएला विमे नाभा, ३२ ले आफ्नो जिब्रामा सानासाना प्लास्टिकका टुक्रा शल्यक्रिया गरेर घोचेकी थिइन् । ठोस पदार्थ केही खान नसकियोस् भनेर । तरल पदार्थ मात्र खाएपछि शरीर मोटो हुँदैन भनेर। मिस भेनेजुएला बन्न त्यहाँका महिलाले आफ्नो तलबको आधा पैसा सौन्दर्य प्रशाधनमा खर्च गर्थे ।
सावित्री गौतमको ‘शृङ्खला भर्सेज निर्मला’ पढेर पक्कै केही वामपन्थीले सावित्रीलाई ‘गाली’ गरे होलान् । केहीले समर्थन पनि गर्लान् तर चुपचाप । सायद हाकाहाकी सावित्रीको विचारको समर्थन गरे अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भइन्छ भन्ने डर होला । ‘सुन्दरी’ शृङ्खलाले सुन्दर नेपालको ‘नाक’ राख्न अहिलेसम्म जति मिहिनेत गरिहेकी छन्, त्यसका लागि उनलाई साधुवाद दिनैपर्छ । त्यतिका धेरै पैसा, समय, शक्ति खर्च गरेर भए पनि ‘विश्व सुन्दरी’ को माझमा उभिने योग्यता हुनु चानचुने होइन ।
तर, शृङ्खलाले ‘मैले महिलाको शरीरलाई वस्तु बनाएको छैन’ नभनिदिए नै वेश हुन्थ्यो । ‘मलाई मेरो सौन्दर्य देखाउने अधिकार छ । मेरो यो मानव अधिकार हो, महिला अधिकार हो’ भनेर स्पष्ट रूपमा उभिए नै वेश हुनेथियो ।
कतिले भनेको सुनियो, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई जिताउन ‘भोट हाल्नू’ भनेर ‘सर्कुलर’ पनि गरेको छ, अरे । तर, मलाई थाहा छ— यो झूटो हो । समाजमा नयाँ बिहानीको थालनी गर्ने आदर्श बोकेको पार्टीले सौन्दर्य प्रतियोगितामा कसैलाई जिताउन ‘सर्कुलर’ जारी गर्‍यो होला र ? पार्टीले त गाउँघरमा गएर समाजमा जनचेतना जागृत गराऊ, जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकारको बारेमा बताऊ, अन्यायसँग लड्न सिक र सिकाऊ भन्ने सर्कुलर जारी गर्न सक्छ । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीका बुद्धिजीवीलाई पनि थाहा छ कि सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू महिलालाई चीज/वस्तु बनाएर बेच्ने अवधारणाबाटै ल्याइएको हो । ठूलाठूला सौन्दर्य प्रशाधन बनाउने कम्पनीहरूले आफ्ना प्रशाधन ‘कहाँ बेच्ने’ भनेर ठाउँ खोजिरहेको हुन्छ । अनेकथरीका हीराका गहना बनाउने कम्पनीले कसरी ‘हीरा है सदा के लिए’ भन्दै विज्ञापन गरेर बढी महिलालाई हीरा किन्न लगाउन सकिन्छ भनेर यो प्रतियोगितामा पैसा हालेका हुन्छन् । सहभागीहरूले जितेपछि हीराका सेट उपहार पाउँछन् । त्यही सेट लगाएर फोटो खिचाएपछि संसारभरिका महिलाको मन तानिन्छ, हीराको बिक्री बढ्छ ।
सौन्दर्य प्रशाधनको कुरै नगरौं, यस्ता कम्पनीले कुन देशमा महिलालाई आफ्नो ‘कम्पनी’ को मालसामान किन्न लगाउँदा फाइदा हुन्छ भनेर हेरिरहेका हुन्छन् । व्यापारीको धर्मै त्यही हो । अनैतिक हुने भएन । तर, मैले समस्याचाहिँ तब देख्छु जब यस्ता सौन्दर्य प्रशाधन कम्पनीले मानवीय मूल्य, मानवीय सौन्दर्य चेतना आदि सबै महिलाको आँखा, नाक, दाँत, वक्ष र कम्मरमा हुन्छ भन्ने भावना जागृत गराइदिन्छन् । अनि बुद्धिजीवी भन्ने मजस्ता पनि त्यसको फन्दामा पर्छौं । सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदा कुनै देशका गाउँघरका, काम गरेर पसिना निकाल्ने, युवती, हातमा ठेला परेका युवती, भारी बोकेर उकाली ओराली गर्ने युवती मञ्चमा उभिँदैनन् । उनीहरूसँग न पैसा हुन्छ न ‘अनुहार’ र ‘शरीर’ देखाउने ‘सौन्दर्य ।
पहिले पहिले पढिन्थ्यो, ‘संसारमा सबभन्दा बढी सुन्दरी उत्पादन गर्ने देश हो भेनेजुएला ।’ संसारमा सबभन्दा बढी तेल भण्डारण भएको भेनेजुएलामा युवतीहरूलाई सानैदेखि सुन्दरी हुन प्रेरित गरिन्थ्यो । पर्याप्त मात्रामा पैसा भएकाले सायद त्यहाँको समाज र परिवारले आफ्ना छोरीहरूलाई सौन्दर्य प्रशाधन दिन समस्या भोग्नुपर्दैनथ्यो । र, युवतीहरूको सपना नै सुन्दर बनेर ‘विश्व सुन्दरी’ को ताज पहिरने हुन्थ्यो ।
तर, यसका लागि त्यहाँका युवतीहरूले कस्तो बलिदान गर्नुपथ्र्यो भन्ने विचार ‘सौन्दर्य’ हेर्ने मानिसले थाहा पाउन सक्दैन । त्यहाँ १२ वर्षे बालिकाको नाक, पुठ्ठाको शल्यक्रिया गरेर सौन्दर्य बढाउन मातापिता सहजै स्विकार्थे । १६ वर्षमा वक्षस्थलको शल्यक्रिया गरेर ठूलो देखाइने चलन पनि रहेछ । दाँतलाई मिलाउने त सहज कामै हो । तर, मातापिताले ९ वर्षीया बालिकालाई ‘हर्मोन’ सुई दिएर ठूलो बनाउने काम गरिन्थ्यो भन्ने पढेपछि चाहिँ लाग्यो— सौन्दर्यका लागि अलि बढी नै ‘बलिदान’ दिनुपर्ने रहेछ । ९ वर्षमा त्यस्तो हर्मोन दिएपछि ती बालिकाको शरीरमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर त्यहाँको समाजले किन नसोचेको ? ‘सुन्दरता’ भएपछि ‘स्वास्थ्य’ बारे के वास्ता भनिएको होला सायद ।
मिस भेनेजुएला विमे नाभा, ३२ ले आफ्नो जिब्रामा सानासाना प्लास्टिकका टुक्रा शल्यक्रिया गरेर घोचेकी थिइन् । ठोस पदार्थ केही खान नसकियोस् भनेर । तरल पदार्थ मात्र खाएपछि शरीर मोटो हुँदैन भनेर (न्युयोर्क पोस्ट, जनवरी २५,२०१५) । मिस भेनेजुएला बन्न त्यहाँका महिलाले आफ्नो तलबको आधा पैसा सौन्दर्य प्रशाधनमा खर्च गर्थे । सुन्दर देखिन १५ वर्षीया चोरजेलो मेरोले हजुरआमासँग पैसा मागिन्, त्यसले उनले नाकको शल्यक्रिया गरिन् । हजुरआमा– आफू झोपडीमा बसे पनि नातिनी सुन्दर हुँदा खुसी भइन् । लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने हजुरआमाको पिर नाक राम्रो बनाएकी १५ वर्षीया मोरोले के बुझून् ।
भेनेजुएलामा महिलाको शरीरको शल्यक्रिया गरेर प्लास्टिक सर्जनले पर्याप्त पैसा कमाउँछन् । प्रत्येक कुनाकुनामा सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने त्यहाँको हालत अहिले गाह्रो भएको छ । कतिपय गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा पेटभरि खान पाउँदैनन् । एक अनुसन्धानअनुसार २०१७ मा त्यहाँ झन्डै १७ प्रतिशत शिशु कम तौलका जन्मेका थिए । खानेकुराको अति कमी भएर बासिन्दाहरू सिमाना जोडिएको देश पनामा र ब्राजिलतर्फ शरण लिन गइरहेका छन् । लामो समयसम्मको राजनीतिक खराब व्यवस्थापनको परिणाम ।
‘सुन्दरी प्रतियोगिता’ मा बुद्धिको प्रतिस्पर्धा हुँदैन । शल्यक्रिया, क्रिम, मेकअप, लुगा आदिले निर्णय गरिन्छ । सौन्दर्य प्रशाधन कम्पनीलाई कुन देशमा आफ्नो व्यापार फैलाउनु छ, त्यहाँका महिलालाई ‘सौन्दर्यप्रति जागरुक गराएर त्यहींका महिलालाई ‘विश्व सुन्दरी’, ‘ब्रह्माण्ड सुन्दरी’ बनाइन्छ । भारत, चीन, थाइल्यान्डमा पनि कम्पनीहरूले ‘विश्व सुन्दरी’ र ‘ब्रह्माण्ड सुन्दरी’ बनाइदिए । अब ती ठाउँका महिलाले धेरै प्रशाधन प्रयोग गर्छन् ।
चीन, भारत आदि देशमा सुन्दरताको भाषा बदलिएर ‘मानसिक अवस्था’ मै फरक आएको छ । गोरो भएन भने जीवनमा सफलता पाइँदैन, प्रेम पाइँदैन भन्ने भावनाले विचरी बालिका/किशोरी/युवती सधैं ग्रसित । हरतरिकाले गोरो बन्न चाहन्छन् । चाहे त्यसले स्वास्थ्यमा जतिसुकै हानि गरोस् ।
भारतमा पहिलेपहिले मिस इन्डियालाई ‘तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ’ भनेर प्रश्न गर्दा ‘समाज सेवा’ भन्थे । ‘मदर टेरेसा’ मन पर्छ भन्थे । तर, पछि कुनै पनि भारतीय ‘विश्व सुन्दरी’, ‘ब्रह्माण्ड सुन्दरी’ ले ‘समाज सेवा’ गर्छु भनेको वाचा सम्झेनन् ।
यदि मिस खतिवडा एक कम्युनिस्ट पार्टीकी सदस्यकी छोरी नभएकी भए सायद नेपाली समाजमा यति धेरै छलफल हुँदैन थियो वा कम्युनिस्टहरू ‘सत्तामा’ नभएको भए पनि यति उनको बारेमा धेरै विमर्ष हुँदैनथियो । उनका बाबुले ‘मेरी छोरी भए पनि उसलाई आफ्नो जीवनमा के गर्ने भन्ने अधिकार छ’ भने पनि हुन्थ्यो ।
मिस खतिवडाले सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिंदा र त्यति उचाइसम्म पुगेर नेपालको नाम र नाक राख्न लागेकी छन् भने उनलाई बधाइ दिनैपर्छ । उनी एक प्रकारले ‘सेलिब्रिटी’ भइसकिन् । अब उनले म ‘समाज सेवा’ मा लाग्छु भन्लिन् । लागे राम्रो ।
यदि मिस खतिवडाले निर्मलाका लागि बोलिदिइन् भने उनलाई भोट दिनेहरूले राम्रो नै मान्नुपर्छ ।
उताबाट नेपालमा फर्केपछि आफ्नो ‘सेलिब्रिटी’ अवस्था प्रयोग गरेर उनले तराईका दलितका लागि, सुदूरपश्चिमको छाउपडीविरुद्धमा बोलिन्, लेखिन् भने त्यसलाई पनि राम्रो नै मान्नुपर्ला । तर, २२ वर्षीया युवतीबाट हामीले उनले यसो गरुन् भनेर बढी आशा गर्नु पनि त भएन नि ।
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७५ ०८:५१